अन्ततः मन्त्रीको सूचीबाट बाहिरिएपछि मेटमणि चौधरीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया – GALAXY
अन्ततः मन्त्रीको सूचीबाट बाहिरिएपछि मेटमणि चौधरीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी रहेका मेटमणि चौधरी अन्ततः मन्त्रीको सूचीबाट बाहिरिएका छन्। मन्त्रालयको संख्या कम हुनु र अन्य नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेपछि उनको नाम अन्तिम समयमा काटिएको बताएएको छ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर सांसद चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका छन्।
उनले भनेका छन्- ”को मन्त्री बन्नु भयो? को मन्त्री हुनु भएन ! मुख्य बिषय होइन। मुख्य बिषय प्रणाली जोगिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्च कायम भएको छ र कानुनी राज्यको स्थापना भएको छ।
जहाँसम्म मन्त्री बन्ने सम्भावनाको कुरो- प्रतिनिधि सभाको सदस्यले त्यो चासो राख्छ र राख्नु पनि पर्छ तर दीर्घकालीन चेत राखेर राजनीतिको खुल्ला चौरमा प्रवेश गरेको राजनीतिक खेलाडीको लागि मन्त्री पद गौण बिषय बन्न जान्छ। फेरि मन्त्री हुने कुरो- सबै प्रकारका कम्बिनेसनहरू मिल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो कम्बिनेसन नमिल्न नि सक्छ। आजजको परिस्थिति यही नैहो।
हामी कठिन मोडमा छौं। यो घडीमा सबैमा धैर्यधारणको जरूरी छ। यसैले निर्णय गर्नु हुने नेतृत्वलाई अनावश्यक दबाब दिनु जरूरी छैन। पार्टीलाई अझ सशक्त र समृद्ध बनाउनु जरूरी छ। पार्टी साइजमा नआउँदै कुनै पनि प्रकारका गुनासा र मोलमोलाइको लागि स्पेश दिनु जरूरी देख्दैन।
नेपालको लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने कुरामा योगदानको लागि पहल गरौं। यो बीचमा मप्रति धेरै साथीहरूले साहनुभूति राख्नुभएको महसुस मैले गरेको छु। सबै माहनुभाबहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र अगामी दिनमा पनि उच्च प्रकारको समन्वयको अपेक्षा पनि लिएको छु।
अन्तमा- मन्त्रीको सिफारिसमा पर्नुभएका सबै माननीयज्युहरूको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना ब्यक्त गर्दछु।”